Ihe mgbochi: Otu esi ejiri ihe ntanetị nke ntanetị nke Web Crawlboard
E nwere ọtụtụ nkuzi maka N'onwe Gị ihe ntanetị niile na Intanet. Ọ bụrụ naanị na ị chọrọ iwepụta naanị ntakịrị data, nkuzi ga-enyere aka. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ nnukwu data dị na ya mgbe niile, mgbe ahụ, ị ​​ga-akwụ ụgwọ ọrụ ụlọ ọrụ weebụ ntanetị nke ọzọ.Crawlboard bụ otu n'ime ndị na-enye ọrụ dị otú ahụ, ọtụtụ ndị na-eji ya maka ọrụ ntanetị weebụ ha. Igwe okwu a dị ezigbo mma. Ya mere, a na-atụ aro ya maka ndị ọ dị mkpa iji nyochaa nnukwu data mgbe niile.
E wezụga ọrụ ya, ọ dịkwa mfe iji. Uzo di mfe iji choro ikpo okwu aburula ebe a.
Gaa na ntinye akwụkwọ mkpesa weebụ CrawlBoard site na ịpị njikọ a. Jupụta n'ụdị ndebanye aha n'ụzọ kwesịrị ekwesị. E nwere ubi maka aha mbụ, aha ikpeazụ, adreesị ozi-e nke ụlọ ọrụ, na ọrụ. Mgbe emechara gị, pịa bọtịnụ nbanye. A ga-ezipụ ozi ederede na adreesị email gị maka nkwenye. Mepee email ma pịa njikọ nkwenye iji mee ka akaụntụ ọhụrụ CrawlBoard rụọ ọrụ.
Nzube bụ isi nke nzọụkwụ a bụ ịgbakwunye saịtị ka ị na-arahụ, ma ịkwesịrị ịmepụta otu saịtị. Otu nchịkọta saịtị bụ otu saịtị nke nwere usoro yiri nke ahụ. Nke a bụ maka ndị mmadụ na-achọkarị nyocha data site na ọtụtụ saịtị n'otu oge.
Iji mepụta otu saịtị, pịa "Mepụta saịtị ọhụrụ". Ọ dị n'akụkụ aka nri nke nhọrọ nhọrọ nchịkọta. Mgbe nke ahụ gasị, ịnwere ike ịgbakwunye saịtị niile dị na saịtị ahụ otu mgbe nke ọzọ site na ịpị na njikọ Tinye bụ nke dị na akuku aka nri nke ibe. Mgbe ahụ, họrọ saịtị otu n'otu.
Gaa na windo ụlọ ọrụ ahụ iji nye aha pụrụ iche maka nchịkọta saịtị gị. Cheta na saịtị niile dị na otu ụlọ ọrụ ga-enwe otu ụdị ahụ, ọ nwere ike ị gaghị enweta ezi ọdịnaya.
Iji ghọta ihe nchịkọta saịtị ahụ dị, jiri nchịkọta saịtị rụọ ọrụ. Ọ bụrụ na ọrụ ahụ a rịọrọ bụ iji wepụ ọrụ site na mbadamba ọrụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-achọ ịmepụta otu saịtị na-arụ ọrụ iji kwado ọrụ ahụ na saịtị niile na saịtị ahụ ga-abụ saịtị nchịkọta ọrụ.
Dị ka ebe achọrọ na ihuenyo a, ịkwesịrị ịhọrọ oge nke nbudata data, usoro nnyefe, na usoro ịnyefe. Ọtụtụ ugboro nchịkọta data bụ kwa ụbọchị, kwa izu, kwa ọnwa, na omenala.
Maka usoro nnyefe, ị nwere ike ịhọrọ otu n'etiti XML, JSON, na CSV. Na maka usoro nnyefe, ịkwesịrị ịhọrọ n'etiti FTP, Dropbox, Amazon S3, na REST API.
A na-eche ihuenyo maka ozi ndị ọzọ. Ọ bụ maka ndị ọrụ na-akọwa ọrụ ntanetị weebụ ha. Ọ bụ ezie na ọ bụ nhọrọ, ọ dị mkpa ịgụnye ozi agbakwunyere n'ihi na ị na-akọwa ọrụ gị, otú ahụ ka onye na-ahụ maka ọrụ ga-aghọta kpọmkwem ihe ịchọrọ, ọ ga-arụpụta ihe ka mma.
Ị nwekwara ike ịrịọ maka ụfọdụ ọrụ agbakwunyere na ihuenyo a. Ụfọdụ n'ime ha bụ ndị na-agbanye aka na ntinye aha, Njikọ Njikọ, Ihe nbudata ihe oyiyi, na nnyefe mbupu.
N'ebe a, naanị mkpa ị pịa bọtịnụ "Zipu maka ike". Ebumnuche bụ maka onye na-ahụ maka ọrụ ịlele ma ọ bụrụ na ọrụ gị nwere ike ime. Ị ga-enweta email na-agwa gị ma ọ bụrụ na ọrụ gị ga-eme ma ọbụghị. Ọ bụrụ na ọ bụ, ị nwere ike ịga ugbu a ma kwụọ ụgwọ. Ozugbo a kwadoro ịkwụ ụgwọ gị, ìgwè ọrụ CrawlBoard ga-arụ ọrụ.
Mgbe ị kwụchara ụgwọ, naanị gị ga-echere ka ị na-echekwa data gị na usoro ịkọwapụtara, site na usoro ịnyefe gị Source .